Taageerada Tech | Shijiazhuang Neming Soo Dejinta & Dhoofinta Co., Ltd.
Jaakadahayaga jilicsan ayaa laga sameeyay tayada waxqabadka 3in1.
Dharka fidsan ee bannaanka waa DWR dhammaatay, dhexe oo leh xuubka TPU, lafta gudaha ee dhogorta yar yar, Dharka ayaa ah mid aan biyuhu ka hortagi karin, dabeylo lahayn oo neefsan kara, kaa dhigaya mid qallalan oo raaxo leh dhammaan xiisahaaga bannaanka. Waxqabadka biyuhu wuxuu celiyaa biyaha banaanka halka nidaamka neefsashada hydrophilic u ogolaanayo qoyaanka gudaha inuu baxsado. Mashiinka sare ee DWR wuxuu xoojiyaa tayada biyuhu wuxuuna ka caawiyaa biyaha inay baxaan marka lagu daro dharka waxqabadka dabaysha.
Waxay ku habboon tahay socodka banaanka, kaamamaynta, shanlada ama meel kasta oo kale oo aad u baacsato banaanka ay ku geyso.
Waa maxay Shaati orodku?
Shaati ordaya waxaa badanaa laga sameeyaa dharka waxqabadka waxaana loogu talagalay raaxada ugu badan inta uu socdo. Noocyo badan oo kala duwan ayaa la soo saaraa si loo waafajiyo xaaladaha cimilada ee kala duwan, noocyada orodka, iyo dookhaaga shaqsiyeed.
Orodyahannada qaarkood waxay xirtaan funaanad caadi ah oo cudbi ah oo ay ku ordaan, gaar ahaan haddii ay marmar yihiin orodyahanno ama ay hadda uun isboortiga ka bilaabayaan. Shaatiga ordaya wuxuu ku leeyahay faa iidooyin dhowr ah funaanada, oo ka kooban dhidid ka soo baxa maqaarka, dhaqso u qalalan, ka hortagga UV, urta.
Inta badan shaatiyada orda ee loogu talagalay bilaha xagaaga iyo heerkulka diiran waxay muujinayaan dhidid dhidid iyo fiilooyin yareeya. Qaarkood sidoo kale waxay leeyihiin ilaalin UV ah. Dharka oo ay ku jiraan siligyada qalinka ama dhoobada dhoobada ayaa bixiya labadaba waxyaabaha ka hortagga dhididka iyo urta ka hortagga urta. Maro ka hortagga jeermiska ayaa sidoo kale loogu talagalay in lagu yareeyo urta.
Ujeedada ugu weyn ee shaatiga orodka jiilaalka waa inuu ahaado mid diiran oo qafiif ah. Qalabka dardaro, sida polyester iyo isku darka fiber, ayaa badanaa la isticmaalaa. Waxa kale oo jira shaatiyo socod jiilaal ah oo ay ku jiraan dabool ama godadka suulka ee gacmaha si qayb ahaan loogu daboolo gacmaha. Gaar ahaan cimilada qabow, waxaa ugu wanaagsan in lagu lebisto lakabyo, oo ay ku jiraan ugu yaraan shaati ordaya iyo jaakad fudud oo ka sameysan naylon ama waxyaabo kale oo dabaysha u adkaysta.
Shaatiyada orodka ragga iyo dumarka labadaba waxaa lagu heli karaa gacmo dhaadheer, gacmo gaagaaban, gacmo la'aan, iyo qaababka taangiyada. Ku habboonaanta dharkaani waxay u dhexeeyaan min dabacsan ilaa shaatiyo isku-dhejis ah, kuwaas oo si aad ah u habboon. Noocyada Neckline waxaa ku jira qoorta qoorta loogu talagalay diirimaad dheeri ah, iyo shaqaalaha iyo qaababka v-neck. Astaamaha kale ee mararka qaarkood laga helo shaatiyadaha ordaya waxaa ka mid ah jeebado zippered iyo suumano qarsoon si loogu ilaaliyo fiilooyinka headphone-ka meesha.
Waa maxay dharka qoyaanku qoyayo?
Wicking, waxaa loola jeedaa awoodda dharkaas si uu qoyaanka uga fogeeyo jirka iyo dharka laftiisa; kartida neefsiga iyo ka dhigista maqaarka isticmaalaha inuu dhidid dhididku.
Maqaar wiiq ah, macnaheedu waa in dharku ay ku jiraan xididado yar-yar oo balaaran kuwaas oo baaxad weyn u leh in qoyaanka, sida dhididka, looga jiido maqaarka oo looga baxo oo looga baxo. Tani waxay kaa caawin kartaa jirka inuu qallalo oo uu qaboojiyo xitaa marka qofku dhidid ka helo jimicsiga.
Waxqabadkayaga sare, farsamada, dharka neefta leh, miyaad kaa dhigi doontaa mid qalalan oo raaxo leh maalintii oo dhan. Ha ka welwelin dhidid ka dib.
Dharka digaagga waxaa loo isticmaalaa dhammaan noocyada waxqabadyada bannaanka laga bilaabo socodka illaa socodka, waxaana loo isticmaalaa dhammaan xilliyada oo dhan laakiin waxay si gaar ah waxtar ugu leedahay heerkulka qabow. Waxay u shaqeyn kartaa sidii insulator wanaagsan, marka laga hadlayo kuleylka, sidoo kale. Ku habboon dharka isboortiga, xirashada tababarka, lakabka salka, dharka isboortiga iwm.
Maydho baraf: sida loo siiyo funaanadaada shaashaddaas guridda ah ee guridda
T-Shirt-yada ugu fiican maaha kuwa cusub, ee waa kuwa duugoobay oo ka jilicsan maydhashada tirada badan. Waxay leeyihiin xoogaa da 'ah iyaga. Sidee loo helaa shaati-gacmeedka nooca loo yaqaan 'T'?
Hoos waxaa ku yaal nidaamka barafka lagu dhaqo:
1, Dheji kubbadda caagga ah ee qallalan ee ku jirta kalsiyam
2, Qalalan shiidi shaati T kubbadda caagga ah ee silsiladaha wareega ee gaarka ah. Inta lagu gudajiro hawshan macdanta 'potassium permanganate' waxay ku madoobaaneysaa dharka barta lagala xiriirayo
3, Hubi saamaynta dhaqida
4, Ku maydh biyaha
5, Dhex-dhexaadin lagu sameeyo maadada loo yaqaan 'oxalic acid'
6, Ku maydh biyaha
7, mari jilciye
Markaa waxaad ku heli kartaa shaadhka cusub ee aad xidhan tahay.
Fadlan ogow, tan waa inay sameysaa wershadda dharka dhaqda, oo intaad tolaneyso, waa inaad isticmaashaa cirbado kubbadda ku habboon oo aad irbadda ku beddeshaa waqtiga. Haddii kale, waxaa jira qatar in lagu dhaawaco shaatigaaga dharka.